DXF: तपाईंलाई यो फाईल ढाँचाको बारेमा के जान्नुपर्दछ नि: शुल्क हार्डवेयर
तपाईं यो लेखमा आउन सक्नुहुन्छ किनकि तपाईंलाई थाहा छ DXF ढाँचामा फाईलहरू र तपाईंले उनीहरूको बारेमा अझ बढी जान्नु आवश्यक छ, वा केवल जिज्ञासाको बाहिर किनभने तपाईं तिनीहरूलाई चिन्नुहुन्न। दुबै केसहरूमा, म तपाईंलाई डिजाईनको क्षेत्रमा यस धेरै महत्त्वपूर्ण फाइल ढाँचाको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा देखाउने प्रयास गर्नेछु।
थप रूपमा तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ कि त्यहाँ धेरै छन् मिल्दो सफ्टवेयर यस ढाँचाको साथ, र केवल AutoCAD ले डिजाइन भण्डारण गर्न वा तिनीहरूलाई DXF खोल्न सक्दछ। वास्तवमा, संभावनाहरू धेरै असंख्य छन् ...
1 DXF के हो?
2 सफ्टवेयर मिल्दो
3 थ्रीडी र DXF प्रिन्टिंग
4 DXF 3D र CNC मुद्रणको लागि
DXF के हो?
DXF अंग्रेजी को लागी एक्रोनिम हो डार्वि Exchange एक्सचेन्ज प्रारूप। .Dxf विस्तारको साथ एक फाईल ढाँचा कम्प्युटर-द्वारा चित्रित वा डिजाइन, कि CAD को लागी प्रयोग गरीन्छ।
Autodesk, प्रसिद्ध AutoCAD सफ्टवेयरको मालिक र विकासकर्ता, एक जसले यो ढाँचा सिर्जना गर्नुभयो, विशेष गरी यसको सफ्टवेयर द्वारा प्रयोग गरिएको DWG फाईलहरू र बजारमा उस्तै अन्य कार्यक्रमहरू बीचको अन्तर सक्षमताका लागि।
पहिलो पटक आरोस 1982 माAutoCAD को पहिलो संस्करणको साथ। र यो यो कि समय बित्दै जाँदा DWGs झन् झन् धेरै जटिल हुँदै गयो, र DXF मार्फत यसको पोर्टेबिलिटी जटिल भएको छ। सबै DWG- अनुरूप कार्यहरू DXF मा सारिएका थिएनन र यसले मिल्दो मुद्दाहरू र बेमेल गर्दछ।
थप रूपमा, DXF रेखाचित्र ईन्टरचेन्ज फाइलको एक प्रकारको रूपमा सिर्जना गरिएको थियोaविश्वव्यापी ढाँचा। यस तरीकाले, CAD मोडेलहरू (वा थ्रीडी मोडलि)) भण्डारण गर्न सकिन्थ्यो र अन्य सफ्टवेयर वा विपरितले प्रयोग गर्न सक्दछ। त्यो हो, सबैजना सजीलोसँग आयात गर्न वा यो ढाँचामा निर्यात गर्न सक्दछन्।
DXF सँग रेखाचित्र डाटाबेसको समान आर्किटेक्चर छ, जानकारी भण्डारण गर्दै लेआउट वर्णन गर्न सादा पाठ वा बाइनरीहरू र यसलाई पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक सबै कुरा।
त्यहाँ अनन्त छन् सफ्टवेयर अनुप्रयोगहरू जसले DXF ढाँचामा यी फाईलहरू ह्याण्डल गर्न सक्दछ, केहिले मात्र डिजाइन खोल्न र प्रदर्शन गर्न सक्दछ, अन्यले पनि आयात / निर्यात गर्न सक्ने साथै डिजाइनहरूलाई परिमार्जन गर्न सक्दछन्।
entre सफ्टवेयर सूची ज्ञात छ कि DXF संग उपयुक्त हुन सक्छ हाइलाइट:
ब्लेंडर (आयात स्क्रिप्ट प्रयोग गरेर)
माइक्रोसफ्ट अफिस (वर्ड, भिजियो)
पेन्ट शप प्रो
यस अनुसार प्लेटफर्म जुन तपाईं काम गर्नुहुन्छ तपाईं एक वा अन्य अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी:
Android- तपाईं AutoCAD प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन मोबाइल उपकरणहरूको लागि पनि उपलब्ध छ र DXF स्वीकार गर्दछ।
Windows- तपाईं अरूको बीचमा AutoCAD र डिजाईन समीक्षा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै टर्बोकेड, CorelCAD, CorelDraw, ABViewer, क्यानभास एक्स, एडोब इलस्ट्रेटर, इत्यादि।
MacOS: त्यहाँ धेरै प्रख्यात डिजाइन कार्यक्रमहरू छन्, ती मध्ये एउटा AutoCAD हो, तर तपाईंसँग SolidWORKS, DraftSight, इत्यादि पनि छन्।
लिनक्स: उत्तम ज्ञात र सब भन्दा धेरै प्रयोग भएको लिबरकेड हो, तर तपाईं ड्राफ्टसाइट, ईन्स्क्याप, ब्लेन्डर, फ्रीक्याड आदि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
ब्राउजर: DXF अनलाइन खोल्नको लागि, प्रोग्रामहरूको आवाश्यकता बिना, तपाईं पनि तिनीहरूलाई तपाईंको मनपर्ने ब्राउजरबाट गर्न सक्नुहुन्छ सेयरकेड वा पनि ProfiCAD.
र अवश्य पनि, त्यहाँ अनलाइन र स्थानीय उपकरणहरू छन् रूपान्तरण DXF सहित बिभिन्न फाईल स्वरूपहरू बीच। त्यसकारण, तपाईं परिवर्तन गर्न वा समस्या बिना अन्य ढाँचाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस् मँ ग्यारेन्टी दिँदिन कि डिजाईन उस्तै हुनेछ वा केहि गलत मिसईलन्ड ...
थ्रीडी र DXF प्रिन्टिंग
यदि तपाईं एक प्रयोग 3D मुद्रक तपाइँले जान्नु पर्छ कि त्यहाँ सफ्टवेयर को लागी पनि छ बिभिन्न ढाँचाहरूको बीच रूपान्तरण निकै रोमान्चक। यो यी दुई विकल्पहरूको मामला हो:
मेश्लाब: एक पोर्टेबल, खुला स्रोत सफ्टवेयर जुन व्यापक रूपमा थ्रीडी मेशहरू प्रशोधन गर्न र सम्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईं विभिन्न ढाँचामा वस्तुहरू उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै OBJ, OFF, STL, PLY, 3DS, COLLADA, VRML, GTS, X3D, IDTF, U3D र, अवश्य पनि, DXF। यो लिनक्सको लागि उपलब्ध छ (दुबै सार्वभौमिक स्न्याप प्याकेजहरूमा र कुनै पनि डिस्ट्रोको लागि AppI छविमा), म्याकोस र विन्डोज।
MeshMixer: अघिल्लो जस्तै समान छ, एक वैकल्पिक। यस अवस्थामा यो नि: शुल्क पनि छ र म्याकोस र विन्डोजको लागि पनि उपलब्ध छ।
DXF 3D र CNC मुद्रणको लागि
को प्रसार संग थ्रीडी प्रिन्टि and र CNC मेशिनहरू उद्योगमा, DXF फाईलहरू धेरै महत्वपूर्ण भएको छ। तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि त्यहाँ केहि वेबसाइटहरू छन् जुन तपाईंलाई वस्तुहरूको निर्माणको लागि सुविधा पुर्‍याउन DXF फाईलहरू तयार-डिजाइनको साथ डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। त्यस तरीकाले तपाईले आफैंलाई बनाउनु पर्दैन, जुन धेरै सहयोगी हुन्छ, विशेष गरी यदि तपाईंलाई सीएडी सफ्टवेयर कसरी ह्यान्डल गर्ने बारे थाहा छैन भने।
त्यहाँ केहि वेबसाइटहरू छन् जुन भुक्तान गरिएको छ, कि तपाईंले डिजाइन भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ र उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अरु छन् free, र तपाइँ सबै कुराको एक बिट पाउन सक्नुहुन्छ। साधारण लोगोबाट ताकि तपाईं तिनीहरूलाई बनाउन सक्नुहुनेछ DXF बाट तपाईंको मेशिनमा डाउनलोड गरिएको, वस्तुहरू, गहनाहरू, फर्नीचर, प्लेटहरू आदि।
उदाहरण को लागी, यदि तपाईं माथि सूचीबद्ध कुनै सफ्टवेयर प्रोग्राममा DXF परीक्षण सुरू गर्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईं यी मध्ये कुनै एक प्रयोग गर्नुहोस्। नि: शुल्क वेबसाइटहरू:
DXF CNC का लागि
DXF CNC डिजाइन
CNC DXF फाईलहरू
Así तपाईं ढाँचा संग परिचित हुनेछ र यी डिजाइनहरूको साथ, वा तपाईंले खरीद गर्नुभएको मेशिनको जाँच गर्नुहोस् यदि यसले कार्य राम्रोसँग गर्छ भने कि भनेर ...
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » 3D मुद्रण » DXF: तपाईलाई यो फाईल ढाँचाको बारेमा के थाहा हुनुपर्दछ